AXKAAMTA SOONKA - DERSIGA 2AAD – Beegsonews-Wararka maanta
Home MAQAALO AXKAAMTA SOONKA – DERSIGA 2AAD
Inta aynaan ka hadal waxyaalaha u banneeya qofka mukallafka ahi inuu maalinta Ramadaan afuro, waxaynnu ka horreysiinaynaa waxyaalaha soonka buriya, oo aynnu soo koobnay.
Maxaa buriya soonka?
Soonku waa cibaado ku taagan laba tiir sideynnu dersigii hore ku xusnay, labadaas tiir haddii dhaawac gaadho soonkuna sidoo kale wuu dhaawacmayaa, waana kuwan waxyaalaha jebiya soonka:
Wax cunid ama cabbid amaba isticmaalid wax u dhigma cuntada iyo cabbidda, sida inuu sayloon isku xidho, amaba isku mudo irbad awood cunto ama cabbid siinaysa, arrimahan waxa shardi ah inuu qofku sameeyo isagoo soonkiisa xasuusan cidina aanay qasbin, jaahilna aanu ka ahayn.
In uu si ula kac ah- badheedh ah- isaga matajiyo.
In qofka soommani sameeyo galmo/lamaanaha isqabaa sameeyaan kulan furaash- arrintan hadduu qofka soommani ku kaco waxa ku waajibaya: 1) Inuu Ilaahay u toobad keeno. 2) Inuu maalintaas qalleeyo. 3) Inuu soomo laba bilood oo xidhiidh ah, hadduu awoodi waayana quudiyo lixdan qof.
In uu qofka soommani si toos ah isaga keeno biyaha taranka (Manida) amaba sameeyo fal ula kac ah/ kas ah oo sabab u noqda inay biyuhu ka yimaaddaan, haddiise ay biyuhu ka yimaaddaan isagoon sababta lahayn, sida inuu isagoo hurda riyoodo, amaba uu xanuunsanayo oo xanuun ka keeno biyaha, soonkiisu buri maayo.
In ay gabadhu hesho dhiigga caadada amaba ay umusho, haddii gabadha soomman ay labadan arrimood ku yimaaddaan soonkeedu wuu burayaa.
Inuu qofka soommani niyad ahaan u jebiyo soonkiisa, sida in uu go’aansado inuu wax cuno ama cabbo, soonkiisu wuu burayaa xataa haddaanu waxba cunin ama cabbin.
In uu qofku gaaloobo- ilaahay baannu ka magan gallay- waxa la mid ah isagoo Ilaahay ama Nebigiisa – SCW- aflagaadeeya ama caaya, arrinkani waxa uu burinayaa qofka iimaankiisa, mar haddii iimaankiisu burana camalkiisuna wuu burayaa, oo soonkiisu wuu jabayaa.
Dhammaan qodobadan waxa ku soo arooray nusuus toos ah ama amaba tiigsi ah, waana axkaam ay culimadu isku waafaqsan yihiin.
واعلم أنّ الدّال على الخير كفاعله.